Samihafa ny tanjona :
Samihafa tokoa ny hoe : miraiki-po sy ny tena tia.
Rehefa tena tia dia izay mahasambatra ilay olon-tiana no tanjona.
Rehefa miraiki-po indray dia ilay olona hiraiketan’ny fo no iriana hahasambatra ny tena.
Samihafa ny fomba fifandraisana :
Samihafa tokoa ny fomba fifandraisana amin’ny olona tena tiana sy ny olona iraiketan’ny fo fotsiny:
Maivana kely, tsy misy romoromo ny fifandraisan’ny olona tena tia. Satria ny olona tena tiana iriana ho sambatra dia tsy ao an-tsaina ny haneritery azy hanao zavatra tsy avy amin’ny nahim-pony. Na saro-piaro amin’ny olon-tiany aza ny olona tena tia dia mahafehy izany ihany izy. Mazàna koa rehefa tena tia dia matoky ny olon-tiana ary mamela azy malalaka amin’ny aleha sy ny hatao. Ny tena mampiavaka ny olona tena tia dia izy manohana ilay olon-tiany amin’ny fotoan-tsarotra. Tsy mitady tombony na takalony, tsy miandry valim-pitia ny olona tena tia fa izay ataony dia manana tanjona iray ihany dia ny hahatonga ilay olon-tiany ho sambatra. Tsy manao izay mampalahelo na mahatezitra ny olon-tiany koa ny olona tena tia. Ny olona tena tia araka izany dia tsy mamikitra mafy fa mamela ny olon-tiany hivelatra ary hanana ny safidiny manokana, eny fa na dia tsy ao anatin’ny safidiny aza ianao, ny hany zava-dehibe dia ilay izy sambatra. Maivana sy tsy misy romoromo ny fomba fifandraisana rehefa tena tia.
Ny olona hiraiketan’ny fo dia arahina akaiky dia akaiky satria ahiana sao mandao noho izy niraiketan’ny fo izay. Maha saro-piaro fatratra izy. Rehefa tsy hita izy dia mampitantaina fatratra sao dia miaraka amin’olon-kafa any. Mandiso fanantenana izy rehefa tsy mahavita izay andrasana sy antenaina aminy. Karakaraina tsara izy ary omena teny mamy koa. Atao mifantoka tanteraka aminy ny fiainana manontolo saingy miandry azy hanao ezaka mihoatra na farafarahatsiny mba mitovy izay nomena azy koa. Miandry azy hanao ezaka mba hahasambatra toy ireo fahita ao anaty horonantsary. Mamikitra mafy ny olona hiraiketan’ny fony ny olona miraiki-po satria matahotra mafy ny hijaly raha toa ka hilaozana. Ny olana anefa dia mety hanempotra ilay olona heveriny fa tiany izany. Matetika misy fifamaliana na fifandirana ao anatin’ity fomba fifandraisana ity. Matetika no miady dia miombona indray.
Azonao dinihina ny fomba fifandraisanao amin’ny olon-tianao na ny vadinao. Ny antony mahatonga anao ho saro-piaro aminy, ny zavatra andrasanao aminy. Hahafantaranao izany hoe : tena tianao tokoa ve izy?